Taariikhda dagaalka beenta ah ee Kuuriyada Woqooyi - BBC News Somali
Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu eedeeynayaa in ay soo bandhigtay hub been abuur ama mala awaal ah xilliyadii ugu dambeeyay ee ay muujineysay cududdeeda milateri.
Sarkaal hore uga tirsanaan jiray sirdoonka ciidammada Mareykanka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah qoryaha iyo gantaalada ay Kuuriyada Waqooyi soo bandhigtay aysan ahayn wax jira ama mid sax ah.
Sarkaalkan hore oo lagu magacaabo Michael Pregent ayaa taleefishinka Fox News u sheegay in qaar ka mid ah hubkaasi la soo bandhigay uu yahay wax lagu qoslo.
Balse in la muujiyo cudud milatari oo aan jirin ayaa ahayd xeelad horey loo soo adeegsaday, mararka qaarna waxa ayba noqdeen kuwo miro dhal ah.
Image caption Pyongyang cududeeda milatari ayay caalamka u muujineysaa.
"Xiisadda ayaa aad u sarreysa sababo la xiriira Trump," ayuu yiri James Hannah oo ah ku-xigeenka madaxa barnaamijka Aasiya uqaabilsan xarunta daraasaadka caalamiga ee Chatham House.
Sababta ayaa ah madaxweyne Trump ayaa wacad ku maray in uu 'xallin' doono halista hubka niyuukleerka ee Kuuriyada Waqoqoyi.
Hannah waxa uu sheegay in su'aashu aysan ahayn Kuuriyada Waqooyi ma u babac dhigi kartaa Mareykanka balse ay tahay haddii la soo weeraro maxay sameyn doontaa.
Waxa uu intaasi ku daray in gantaalada qaar ee ay soo bandhigtay xukuumadda Pyongyang ay muujineyso cudud milateri ahaan halka ay gaarsiisan tahay.
Haddii ay dhab tahay iyo haddii kaleba, Hannah waxa uu leeyahay arrintan waxa ay muujineysaa in Kuuriyada Waqooyi ay caddeynayso in ay cagta saartay waddadii u sahli lahayd in ay hubkaasi yeelato, ayna jirin cid ka hor istaagi karto isla markaana aysan cidna ka baqayn.
Sawirkan ayaa laga helay kheydka qaranka ayaa waxa uu muujinayaa qorshaha gaari kuwa gaashaaman ah oo u muuqda in laga sameeyay ulo booc ah oo shareec lagu deday.
Image caption Baabuurta gaashaaman oo been abuur ah ayaa loo adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka.
Xeeladdan ayaa ah mid Britain ka timid, waxaana sawirradan asal ahaan ay ka soo jeedaan kulliyadda tababarada ee ciiidamada, oo ahayd goob ciidadamu ay ku bartaan xeesha la isku qariyo xilligii dagaalkii labaad ee dunida.
Agabka noocan ah ee milateri ee been abuurka ah ayaa loogu tala galay in lagula tacaalo duqeymaha dhanka cirka ah, iyada oo duuliyeyaasha diyaaradaha dagaalka ee cadowga lagu jaheynayo baabuur kuwa gaashaaman ah oo been abuur ah halka ay duqeyn lahaayeen qalab muhiim ah.
Qorshahan is-qarinta ku saleysan ayaa sidoo kale lagu marin habaabin jiray duuliyeyaasha cadowga si aysan u basaasin xarumaha muhiimka ah ee milateri.
Farshaxaniiste ka tirsan milateriga Faransiiska ayaa xitaa sawiray kanaallo iyo webiyo been abuur ah, arrintaa oo ahayd xeelad dagaal oo la adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka.
Mareykanka ayaa horey xeeladdan u adeegsaday, waxa uuna dhisay ciidamo aan jirin oo saldhig looga dhigay Kent iyo sidoo kale xarumo laga hago isgaarsiinta milatariga si jahawareer loo abuuro.
Image caption Not a dead body but a fake parachutist deployed in WW2
Xilligii ay socotay colaaddii sokeeye ee Mareykanka ayaa waxaa dagaalka loo adeegsan jiray tiirar rinji la mariyay oo loo ekeysiiyay gantaallo.
Xeeshan dagaal ayaa ahayd mid aad loo adeegsado dagaalladii dhacay qarniyadii 18-aad iyo 19-aad.
Ruushka ayaa ku caan baxay in uu sameeyo saldhigyo milateri oo ay u dhameys tiran yihiin dhammaan qalabkii loogu talagalay balse dhammaantood ah mid been abuur ah.
Lahaanshaha sawirka Getty Images/Hulton Archive